Funda okuthethwa yiBhayibhile ngesono
Ngeli gama elincinci, ininzi iphakanyisiwe kwisingiselo sesono. IBhayibhile ichaza isono njengokuphula, okanye ukuthobeka komthetho kaThixo (1 Yohane 3: 4). Kwachazwa nangokungathobeli okanye ukuvukela uThixo (Duteronomi 9: 7), kunye nokuzimela kuThixo. Ukuguqulela kwangaphambili kuthetha "ukuphosakela uphawu" lomgangatho oyingcwele kaThixo wobulungisa .
I-Hamartiology iyisebe le-theology elijongene nokufunda ngesono.
Iphanda indlela isono esivela ngayo, indlela echaphazela ngayo uluntu, iintlobo ezahlukeneyo kunye neesigidi zesono, kunye neziphumo zesono.
Nangona imvelaphi eyisiseko yesono ayibonakali, sazi ukuba yafika ehlabathini xa inyoka, uSathana, ilinga uAdamu noEva kwaye ayizange imthobele uThixo (iGenesis 3; Roma 5:12). Ingundoqo yenkxalabo ivela kwisifiso somntu sokuba njengoThixo .
Yonke isono, ngoko, isuka kwizithixo-inzame yokubeka into okanye umntu kwindawo yoMdali. Ngokuqhelekileyo, ukuba umntu uqobo lwakhe. Nangona uThixo evumela isono, akayena umbhali wesono. Zonke izono ziphambuka kuThixo, kwaye zisahlukanisa naye (Isaya 59: 2).
8 Iimpendulo Zemibuzo NgeSono
AmaKristu amaninzi ayakhathazeka ngemibandela ngesono. Ngaphandle kokuchaza isono, eli nqaku lizama ukuphendula imibuzo eninzi ebuzwa ngesono.
Yintoni Isono Sokuqala?
Ngeli xesha igama elithi "isono sokuqala" luchazwe ngokucacileyo eBhayibhileni, imfundiso yobuKristu yesono sokuqala isekelwe kwiindinyana eziquka iNdumiso 51: 5, amaRoma 5: 12-21 kunye neyoku-1 kwabaseKorinte 15:22.
Njengomphumo wokuwa kuka-Adam, isono sangena kwihlabathi. UAdam, intloko okanye ingcambu yoluntu, wabangela umntu emva kwakhe ukuba azalwe kwisimo sesono okanye imeko ewayo. Isono sokuqala, ngoko, ingcambu yesono esichaza ubomi bomntu. Bonke abantu baye bamkela esi simo sono ngenxa yesenzo sokuqala sokungathobeli kuka-Adam.
Isono sokuqala sibhekiswa ngokuba "isono esasizuze njengefa."
Thelekisa iicawa kwiMfundiso yeSiqalo Sokuqala
Ngaba Zonke Iidemon Zilingana noThixo?
IBhayibhile ibonakala ibonisa ukuba kukho iinqununu zesono- ezinye zizothe ngaphezu kobanye (Duteronomi 25:16; IMizekeliso 6: 16-19). Nangona kunjalo, xa kuziwa kwimiphumo engunaphakade yesono, zonke ziyafana. Zonke izono, zonke izenzo zokuvukela, zikhokelela ekugwetyweni nasekufeni okuphakade (kwabaseRoma 6:23).
Sinokuhlangabezana Njani Neengxaki Zesono?
Siye saqulunqa ukuba isono sinengxaki enkulu . Ezi ndinyana zisishiya ngokungathandabuzekiyo:
Isaya 64: 6
Sonke siye saba njengomntu ongcolileyo, kwaye zonke izenzo zethu zobulungisa zifana nezigqoko ezihlambulukileyo ... (NIV)
KwabaseRoma 3: 10-12
... Akukho mntu ulungisa, akukho nanye; akukho bani oqondayo, akukho mntu ufuna uThixo. Bonke baye bajika, bahlanganisene bengenanto; akukho bani owenza okulungileyo, kungekho nanye. (NIV)
Kuba bonke bonile kwaye bawela kuzuko lukaThixo. (NIV)
Ukuba isono sisahlukanisa noThixo kwaye siyasigweba ukufa, sinokukhululeka njani kwisiqalekiso sayo? Ngethamsanqa, uThixo wanikezela isisombululo ngoNyana wakhe, uYesu Kristu . Ezi zixhobo ziya kuqhubeka zichaze impendulo kaThixo kwingxaki yesono ngecebo lakhe elipheleleyo lokuhlengwa .
Kutheni Kwafuneka UYesu Afe?
Kwindlela yamaRoma yokusindiswa
Indlela yokuba ngumKristu
Sinokugweba Njani Ukuba Kukhona Isono?
Izono ezininzi zichazwe ngokucacileyo kwiBhayibhile. Umzekelo, iMithetho Eyishumi isinika umfanekiso ocacileyo wemithetho kaThixo. Banikezela ngemigaqo yokuziphatha eyimfuneko yokuphila kokomoya nokuziphatha. Ezinye iindinyana eBhayibhileni zibonisa imizekelo ecacileyo yesono, kodwa sinokukwazi njani ukuba sisona isono xa iBhayibhile ingacacile? IBhayibhile ibonisa izikhokelo eziqhelekileyo ukusinceda sikwazi ukugweba isono xa singaqinisekanga.
Ngokuqhelekileyo, xa singathandabuzeki ngesono, ukuthambekela kwethu kokuqala kukubuza ukuba kukho into embi okanye engalunganga. Ndingathanda ukucetyiswa ukucinga ngolu hlobo. Kunoko, zibuze le mibuzo ngokusekelwe kwiZibhalo:
Ngaba oku kuyinto enhle kum nabanye? Ngaba oku kunenzuzo? Ngaba kuya kusondeza kuThixo? Ngaba kuya kuqinisa ukholo lwam kunye nobungqina bam? (1 Korinte 10: 23-24)
Umbuzo omkhulu olandelayo ukuwubuza, ngaba lo uya kuzukisa uThixo? Ngaba uThixo uya kusikelela le nto aze ayisebenzise ngenjongo yakhe? Ngaba oku kuya kukukholisa nokuhlonela uThixo? (1 Korinte 6: 19-20; 1 Korinte 10:31)
Unokubuza kwakhona, le nto iya kuthinta njani intsapho yam kunye nabahlobo? Nangona sinakho inkululeko kuKristu kwindawo, asiyikuvumela ukuba inkululeko yethu ibangele umzalwana obuthathaka ukuba akhubeke. (Roma 14:21; Roma 15: 1) Ukongeza, kuba iBhayibhile isifundisa ukuzithoba kulabo abanegunya phezu kwethu (abazali, iqabane, utitshala), sinokubuza, ngaba abazali bam banenkinga ngale nto ? Ngaba ndizimisele ukuhambisa oku kubakho nkokheli?
Ekugqibeleni, kuzo zonke izinto, simele sivumele isazela sethu phambi kukaThixo sisigwebe into echanekileyo neyiphutha kwimicimbi engacacile eBhayibhileni. Singacela, ngaba ndinenkululeko kuKristu kunye nesazela esicacileyo phambi kweNkosi ukwenza nantoni na? Ngaba umnqweno wam ungeniswe kwiNtando yeNkosi? (Kolose 3:17, Roma 14:23)
Sisiphi Isimo Esifanele Sibe Nesono?
Inyaniso kukuba sonke sona. IBhayibhile yenza ukuba kubonakale kwiZibhalo ezifana neyabaseRoma 3:23 kunye noYohane 1:10. Kodwa iBhayibhile ithi uThixo uyayithiya isono kwaye usikhuthaza njengamaKristu ukuba siyeke ukwenza isono: "Abo bazelwe emndenini kaThixo abazenzi ukwenza isono, kuba ubomi bukaThixo buphakathi kwabo." (1 Yohane 3: 9, NLT ) Ukugqithisa ngakumbi le ngxaki iincwadi zeBhayibhile ezibonakala zibonisa ukuba ezinye izono zifanelekile, kwaye eso sono asihlali "simnyama nomhlophe." Yintoni isono kumKristu omnye, umzekelo, akunokuba sisono kumnye umKristu.
Ngoko, ngokubhekiselele kuzo zonke ezi ngqalelo, sisiphi isimo sengqondo esifanele sibe nesono?
Sisona Sono esingenakuthethelelwa?
UMarku 3:29 uthi, "Othe wahlambalaza uMoya oyingcwele akayi kuxolelwa, unetyala lesono esingunaphakade. (NIV) Ukuhlambalaza uMoya oyiNgcwele kubhekiswe kuMateyu 12: 31-32 nakuLuka 12:10. Lo mbuzo wesono esingenakuthethelelwa unzima kwaye uphazamise amaKristu amaninzi kwiminyaka, ndikholelwa ukuba iBhayi- bhile inika inkcazo elula kule mibuzo.
Yintoni ukuhlambalaza uMoya oyiNgcwele?
Ngaba Zikhona Iindidi Zesono?
Isono esicatshulwayo - Isono esicatshulwayo sisinye seziphumo ezibini isono sika-Adam esaba nazo kuluntu. Isono sokuqala sisiphumo sokuqala. Njengomphumo wesono sika-Adam, bonke abantu bangena kwihlabathi ngobuninzi bokuwa. Ukongezelela, isono sesono sika-Adam asikho nje kuphela kuAdam kodwa kubo bonke abantu abaza emva kwakhe. Oku kubonwe isono. Ngamanye amazwi, sonke sifanelwe isijeziso esifanayo njengoAdam. Isono esibangelwayo sisonakalisa ukuma kwethu phambi koThixo, kanti isono sokuqala sonakalisa umlingiswa wethu. Zomntu wesono kunye nesono esicatshulwayo sibeka phantsi kwesigwebo sikaThixo.
Nantsi ingcaciso ecacileyo yohlukwano phakathi kweNqobo yeSono kunye neSono esisisigxina ekufuneni iNkonzo kaThixo.
Iimpazamo zokungabikho kunye neKomishoni - Ezi zono zibhekisela kwizono zomntu. Isono sokuthunyelwa yinto esenzayo (ukuzinikela) ngesenzo sokuthanda kwethu kumyalelo kaThixo. Isono sokungenzi kakuhle kukuba xa siphumelelani ukwenza into eyalwe nguThixo (siphume) ngokusebenzisa isenzo sokuthanda kwethu.
Ukufumana okungakumbi malunga nezono zokungabikho kunye nekhomishini ubone iNew Advent Catholic Encyclopedia.
Iimfa Zobunono kunye Nezono Zobunzima - Izigwenxa zokufa kunye nezenzo ezilungileyo ziyimigaqo yamaRoma Katolika. Izono eziphambene nezenzo zecala zichasene nemithetho kaThixo, kanti izono zokufa ziyimpembelelo enzima apho isijeziso somoya, ukufa kwangunaphakade.
Le nqaku e-GotQuestions.com icacisa ngokucacileyo imfundiso yamaRoma Katolika malunga nezono ezifa kunye nezonakele: Ngaba iBhayi- bhile ifundisa isono sokufa kunye nesono?
Yintoni Isixhobo SekaThixo?
AmaKristu ePentekoste - Ayakholelwa Kanjani?
EBhetelehem: Isixeko sikaDavide kunye nendawo yokuzalwa kaYesu
Ngaba Ufanele Uthathe ixesha lokuPhelela ngaphambi kokufaka isicelo kwiSikolo soMgqibelo?
Kutheni amaBuddhist ayaKhusela isiNxulumaniso?
Ukudala i-Tardy Policy
Ukudibanisa okulula kwe "Share" (ukwabelana)
Eyona ndlela ihamba phambili ye 'South Park' Abalinganiswa kunye neziphene zabo
I-Florida neGeorgia: I-World's Largest Outdoor Cocktail Party
10 Imihla yoSuku lweGroundhog ukukhumbuza ukuba intshukumo isondele
Indlela yokwenza ityuwa eliMnyama eliMnyama
Indlela Yokuthatha Ukuphosa
Iyintoni i-pH yeJer Juice?
UkuQala kunye neNkqubo yokuQala
Eyaziwayo ezi-4-i-Wheel Drive Toys for Kids
Abasetyhini neMfazwe yehlabathi II-Abafazi basebenza
I-Florida Tech GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Umzekelo weZithenko zeFlo
Yintoni eyenzekayo kwiMimiselo yoTshintsho?
Iiprojekti zeSlot Progressive
I-Best Vallenatos kwiMbali